Booqashada Osman Saleh iyo guusha siyaasadeed ee ay heshay Somaliland | Hohad News
Booqashada Osman Saleh iyo guusha siyaasadeed ee ay heshay Somaliland
Wasiirka arrimaha dibedda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed ahna masuul sare oo ka tirsan urur goboleedka IGAD ayaa booqasho ku tagay Somaliland, wuxuuna habeenkii xalay aheyd ku hoyday magaalada hargeysa markii ugu horreysay.
Maamulka Somaliland ayaa qaabilay masuulkii ugu heerka sarreeyay ee ka tirsan ururka IGAD, waxeyna tani ifineysaa waji cusub oo siyaasadda gobolka ah.
Inkastoo dhawr su’aalood la iska weydiiyay booqashada wasiirka hadana dowladda Eritrea waxey xaqiijisay in booqashadaan ay socon doonto muddo saddex maalmood ah, waxaana qof walba maankiisa ka guuxeysa sababta ka dambeysa booqashada xilligaan.
“Waa tallaabo horay u socod leh oo la xiriirta nabadeynta iyo wada noolaashaha Geeska Afrika” ayuu yiri Dr. Mustafa Kaydsane oo la hadlayay idaacadda BBC-da qeybteeda afka Soomaaliga.
Arrintani waxey farxad weyn galisay maamulka Somaliland kuwaas oo sameeyay hab maamuus qurux badan oo muujinaya heerka qanacsanaantooda, sidoo kalana waxey tani cadeyneysaa sida ay Somaliland muhiim ugu tahay gobolka.
Dr. Mustafa oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay iney Somaliland hantisay fursad qaali ah oo ay muddo u sabartay isla markaana ay mar walba rajo qabtay, sidoo kale wuxuu banaanka soo dhigay in maamulka ay farxad weyn ku dareemeen in wasiir arrimo dibad hadana xil weyn ka haya IGAD uu soo booqdo.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in Somaliland ay muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yahiin soo dhaweynta shaqsiyaadka miisaanka leh ee gobolka, waxaana magaalada lagu dhajiyay boorar waaweyn oo lagu xardhay sawirada wasiirka iyo madaxweynaha maamulka mudane Muuse Biixi.
Somaliland & Geeska Afrika
Dadka falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika waxey fahmayaan wakhtigaan in Somaliland ay gaartay dabeyshii isbadalka Geeska ee ka dhalatay wadanka Itoobiya.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si diblomaasiyad leh uga hadlay dabeylahaan ka hor inta aysan soo food saarin, wuxuuna carabka ku adkeeyay in nabadda gobolka ay tahay mid mar walba muhiim wada ah inkastoo dadweynahii uu ka hor hadlay uu sidoo kale u muujiyay inuu calaamad su’aal saarayo arrinka.
Madaxtooyada Hargeysa ayaa martigalineysa xubin ka tirsan IGAD wakhtigaan, waxaana arrintu ay noqotay mid muhiim ah, wasiirka wuxuu aaminsan yahay in maamulka uu markaan ka baxay go’doonkii ay ku jirtay.
Dadka lafa-gura siyaasadda layaab fog kuma sii noqoneyso arrintaan, sababtoo ah waxey arintani daba socotaa booqashadii uu Addis Ababa ku tagay Muuse Biixi dhawaan, wuxuuna ammintaas kulan la qaatay Dr. Abiy Axmed.
Somalilanad waa dhul dhaca meel muhiim u ah, waxaana looga maarmi karin heshiisyada la wada gaaray ee iskaashiga Geeska Afrika, marka dib loo milicsado waxyaabaha ku qornaa waxaa ka mid ah in la sameeyo maalgashi wadajir ah oo kaabayaasha dhanka dhaqaalaha ah, waxaana ugu waaweyn Wadooyinka, qadadka tareenada iyo sidoo kale dekadaha, arrinta muhiimka ahna waxey tahay in Berbera ay ka mid tahay dhulka maamulka taasoo hadda ah goobaha ugu waaweyn ee laga wado howlaha bilowga ah ee isbadalka looga dhalinayo geeska Afrika.
Booqashada & wadahalada Somaliland iyo Somalia
Arrinta ugu muhiimsan ee qurxineysa booqashada wasiirka waxey tahay hadal heynta dib u bilaabidda wadahadalka Somaliland iyo dowladda Federaalka Soomaaliya, sidoo kalana Muuse Biixi ayaa wakhti aan fogeyn hadal bilow ah ku sheegay iney diyaar u yahiin wax walba balse aaney dowladda Turkiga markaan noqon doonin martigalinta.
Dr. Mustafa oo ah qof wax badan la socda ayaa sheegay in booqashada wasiirka ee Somaliland iyo midda Ismaaciil Cumar Geelle ee Muqdisho ay yahiin sheekooyin hoos ka xiriira, wuxuu kaloo aragti fog ka qabaa in labadaan booqasho ay hoos imaanayaan wadahadalada la filayo iney mira-dhalaan ee Somaliland iyo Somalia.
Marka geeska kale laga eego, hadal heynta ah in booqashadaan ay xiriir la leedahay wadahadalada labada dhinac waxaa sababay in labada dowladood ee Soomaaliya iyo Eritrea ay haatan leeyahiin xiriir diblomaasiyadeed oo la isku halleyn karo.
Dr. Mustafa wuxuu fahamsan yahay in wadahadalada labada dhinac ay qeyb ka noqon doonaan IGAD, sidoo kalana ay tahay wax weyn in Somaliland loo arko xubin muhiim u ah Geeska Afrika marka dhan walba laga eego, xagga dhaqaalaha, nabadeynta, wuxuu kaloo dareensan yahay iney tahay wax wanaagsan in la isku soo dhaweeyo.
Wasiirka arrimaha dibedda wuxuu qirayaa in Somaliland iyo dowladiisa ay soo mareen duruufo isku mid ah, sidoo kalana uu ku socdo amarka dowladiisa, taasna waxey muujineysaa sida uu kaga gambaday inuu arrinta booqashadiisa lugta u galiyo iney xiriir la leedahay wadahadalada la filayo iney yeeshaan Somalia iyo Somaliland.